China manifolds fekitori uye vagadziri | Cepai
Standard FC magedhi mavharuvhu anoenderana neAPI 6A 21th yazvino Edhisheni, uye shandisa zvinhu zvakanaka zvebasa reH2S zvinoenderana neNACE MR0175 standard.
Yekupisa Kirasi: PU
Choke Manifold inotorwa kuti ishandise hunyanzvi hwekuchera-tsime reyero yekumanikidza. Kukachidza Zvakawanda kunogona kudzivirira kusvibiswa kwemafuta-rara uye nekuvandudza kumhanya kwekuboora uye kudzora kuputika zvinobudirira. Iyo yakawanda yekukachidzwa ine yekudzipa mavharuvhu, magedhi mavharuvhu, mitsara mapaipi, fittings, kumanikidza gauges uye zvimwe zvikamu. CEPAI Drilltech inopa akasiyana siyana akadzipwa kubva 2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", nekushanda kumanikidza 2,000PSI ~ 20,000PSI sekuenderana neAPI SPEC 16C / 6A.
Uraya hwakawanda hwakakosha michina mune zvakanaka-kudzora system yekupomba yekuchera fluid mumugodhi wetsime kana jekiseni mvura mumusoro wetsime. Inosanganisira mavharuvhu ekuongorora, mavhavha egedhi, geji yekumanikidza nemapombi emitsetse. CEPAI inopa dzakasiyana siyana kuuraya kwakawanda kubva pa2 / 16 "~ 4-1 / 16", nekushanda kumanikidza 2,000PSI ~ 20,000PSI sekuenderana neAPI SPEC 16C / 6A.
Kuchera Matope Manifolds
Kuchera madhaka manzwi ane matope vharuvhu, yakanyanya kumanikidza idenderedzwa mubatanidzwa, yakakwira yekumanikidza musimboti mubatanidzwa, tee, yakakwira yekumanikidza hosipaipi, gokora, yekumanikidza gauge, uye pup mubatanidzwa nezvimwewo. 2,000PSI ~ 10,000PSI sekuenderana neAPI SPEC 16C / 6A
Pamusoro Kuedzwa Manifolds
Maitiro akajairwa epasi bvunzo miti aripo. Izvi zvinowanzo kuve ne swab, yepamusoro tenzi, kugadzirwa, uye kuuraya mitsara mavharuvhu. Dhizaini dzinowanikwawo neyepasi tenzi vharuvhu iri pasi pechinhu chinotenderera. Surface Bvunzo kana Zvakanaka Kupindira Miti inouya nematanho kubva 3 1/16 "kusvika 7 1/16" uye 5,000 psi kusvika 15,000 psi (tembiricha kubva -50 ° F kusvika 350 ° F). Kugadziriswa kwetsika kunowanikwawo pachikumbiro.
Kudzvinyirira Kwakanyanya Choke & Kuuraya Manifolds
Nekubatanidza zvinhu zvakadai seAdjustable uye Positive Chokes, Hydraulic Drilling Chokes, API Flanges, Hammer Lug Unions, API Yakapunzika Muchinjiko uye Tee, Adapter, Spools, Blinds, Crossovers uye Fittings, Choke Control Console, Yakanyanya Pressure Manifold Fittings, Yakakwira Yekumanikidza Gedhi maVheji. (Chinyorwa uye Hydraulic Gedhi Mavharuvhu), Yakanyanya Pressure Plug Mavharuvhu, Ndokugadzira Crosses, ndokugadzira Tees, ndokugadzira Long Radius Magokora, Pressure Kwayedza Assembly, Individual Pressure Tested Fittings and Gate Valves, Mud Vales, Drop Forged Manifold Fittings, Choko, High Pressure Choke Valves , High Pressure Tarisa Mavharuvhu, Hammer Union Forged Tees uye Elbows a zvinoenderana nechikumbiro kubva pedu pachedu kuwanikwa, CEPAI inokwanisa kudzora mhando uye chirongwa cheakaomesesa masisitimu. CEPAI inoda kushanda nevatengi kuti vape mhinduro kwayo yemamwe mapurojekiti. Pazvinoshanda kana kusangana nezvinodiwa nevatengi uye zvinopihwa zvakazara nevakuru vevatatu vanozvimiririra.
Zvadaro: KUKOSHA MISORO